जनावरको सिटमा क्रोधको शीशी - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
मे २०, २०२२ अप्रिल २०, २०१९ द्वारा प्रकाशक
पहिले भनिएझैं, परमेश्वरको क्रोधको शीशीहरूले कपटको विरुद्धमा साँचो सुसमाचार सन्देशको प्रचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
“अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो भाँडो जनावरको आसनमा खन्याए; अनि उनको राज्य अँध्यारोले भरिएको थियो। र तिनीहरूले पीडाको लागि आफ्नो जिब्रो कुन्ते, र तिनीहरूको पीडा र घाउहरूको कारणले स्वर्गका परमेश्वरको निन्दा गरे, र तिनीहरूका कामहरूबाट पश्चात्ताप गरेनन्।" ~ प्रकाश १६:१०-११
जनावरको यो सीट आध्यात्मिक पर्गामोसमा स्थापित भएको थियो, जब शैतान, रोमन क्याथोलिक धर्मको पतित नेतृत्व मार्फत, साँचो इसाईहरूलाई सताउन सुरु गर्न पर्याप्त अधिकार स्थापित गर्न सक्षम भयो। (निस्सन्देह, यो पापल शासनको अन्धकार युगमा पूरा भएको थियो।)
"म तिम्रा कामहरू जान्दछु, र तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ पनि शैतानको आसन हो: र तपाईंले मेरो नाउँलाई पक्रिराख्नु भएको छ, र मेरो विश्वासलाई अस्वीकार गर्नुभएन, ती दिनहरूमा पनि जब एन्टिपास मेरो विश्वासी सहिद थिए, जो शैतानको बासस्थानमा तपाईंहरूका बीचमा मारिएका थिए। ~ प्रकाश २:१३
शैतानको अख्तियारको आसन ती मानिसहरूको दुष्ट हृदयमा थियो जसले परमेश्वरको आज्ञाकारिताको आशिष्हरू भन्दा मानिसहरूको प्रशंसालाई बढी माया गर्छन्। त्यसकारण तिनीहरूले मानिसलाई येशूको ठाउँ लिन र सही वा गलतको न्यायकर्ता हुन अनुमति दिन्छ। यो प्रकाशको धार्मिक संगठन "जानवर" द्वारा पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ।
त्यसैले यहाँ पाँचौं शीशीमा, परमेश्वरको क्रोधद्वारा न्याय गरिँदै आएको अख्तियारको आसन जनावरको हो। प्रकाश 13 मा जनावरलाई ईश्वर र उहाँका मानिसहरूको निन्दा (वा अनादर) गर्न पार्थिव शक्ति भएको धार्मिक संगठनको रूपमा देखाइएको छ।.
“अनि उसले परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्दै आफ्नो मुख खोल्यो, उहाँको नाउँ, उहाँको पाल, र स्वर्गमा बस्नेहरूलाई निन्दा गर्न। अनि सन्तहरूसँग युद्ध गर्न र तिनीहरूलाई जित्नको लागि उहाँलाई दिइएको थियो: र उहाँलाई सबै जातिहरू, भाषाहरू र राष्ट्रहरूमाथि शक्ति दिइएको थियो। ~ प्रकाश १३:६-७
यो एउटै जनावर समुद्रबाट बाहिर आयो, एक प्रतीक जसले "मानिस, भीड, राष्ट्र र भाषाहरू" को प्रतिनिधित्व गर्दछ (प्रकाश १७:१५ हेर्नुहोस्)। प्रकाश 16:3 मा समुद्रमा पहिले नै न्यायको क्रोधको शीशी खन्याइसकेको थियो। त्यसोभए यसले मात्र अर्थ दिन्छ कि जुन दुष्ट समुद्रबाट आएको हो, त्यो पनि दुष्ट हुनेछ, र त्यसकारण पनि परमेश्वरको न्यायको क्रोध चाहिन्छ।
अघिल्लो पोष्टहरूमा भनेझैं, न्याय क्रोध प्रचारका यी शीशहरू मानिसहरूलाई तिनीहरूको अन्धकार र पापपूर्ण छलबाट जगाउन मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। त्यसोभए शीशीहरूले लक्ष्यमा अन्तिम निर्णयको समाप्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ: शीशी केमा खन्याइयो। त्यसोभए एक पटक खन्याइएको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन कि यो खन्याइएकोमा राम्रो केहि बाँकी छैन। तर यो पनि ध्यान दिनुहोस्, प्रत्येक शीशी सम्बन्धित तुरहीले पहिले नै सम्बोधन गर्न थालेको निर्णय पूरा गर्न अनुरूप छ: र त्यो पाँचौं तुरही हो।
प्रकाशको पाँचौं सुसमाचारको तुरहीमा, हामीलाई चेतावनी दिइएको छ कि परमेश्वरको वचनको "कुञ्जी" भएको सेवकाईले यो कुञ्जीलाई दुरुपयोग गरेको छ। शैतानको छल, अथाह खाडलबाट। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पनि आफ्नो अधिकारको आसन स्थापना गर्न प्रयोग गर्नको लागि आफैंमा लिए। ताकि तिनीहरूले पापको पर्दाफास गरेर मानिसहरूलाई चोट पुर्याउन सकून्, तर वचनलाई पर्याप्त रूपमा रोक्नुहोस्, ताकि मानिसहरूले कसरी आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पण गर्ने, सबै पापलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्ने भनेर थाहा नपाओस्। यसो गरेर, तिनीहरूले वचनद्वारा न्याय गर्ने अधिकार लिए, र मानिसहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै शक्ति र अधिकारको अधीनमा ल्याउने, परमेश्वरको अख्तियार होइन। त्यसैले तिनीहरूले प्रोटेस्टेन्ट युगमा रोमन क्याथोलिक चर्चको जस्तै पशु प्रकृति भएको देखाउँदै आफ्नो अधिकारको आसन स्थापित गरे। यसो गर्दा, पाँचौं तुरहीले हामीलाई चेताउनी दिन्छ, कि यो सेवकाईले मानिसहरूलाई आध्यात्मिक पीडा दियो।
र यसैले अन्तिम न्यायको क्रोधको यो पाँचौं शीशीमा, परमेश्वरले यो झूटा सेवकाईलाई तिनीहरूको आफ्नै आध्यात्मिक घाउको पीडा महसुस गराउन लगाइरहनुभएको छ, किनभने तिनीहरूले अरूलाई गरेका छन्। आफूले जे रोपेका छन् त्यही कटनी गरिरहेका छन् । त्यसैले धेरै मानिसहरूको लागि, यो निर्णय धेरै पीडादायी छ। यो किनभने तिनीहरूको धर्म पूर्ण रूपमा अन्धकारले भरिएको रूपमा प्रकट भएको छ। तर किनभने तिनीहरू यसलाई छोड्न चाहँदैनन्, तिनीहरू अझै पनि यस निर्णयको कडा प्रतिरोध गर्छन्, र यसो गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरको निन्दा (अपमान) गर्छन्।
तिनीहरूले पीडाको लागि आफ्नो जिब्रो कुत्थे, किनभने तिनीहरूको जिब्रोले परमेश्वरका साँचो मानिसहरूलाई5औं तुरही चेतावनी सन्देशको समयमा पीडा दिएको थियो। त्यसैले अहिले उनीहरुको जिब्रोलाई पूर्ण अन्धकार देखाइएको छ। तिनीहरूको सन्देश यो के हो भनेर देखाइएको छ: अन्धकार। र यो कुरा बोल्ने तिनीहरूको मुखलाई धेरै पीडादायी छ।
त्यसोभए के यो शीशीले तपाईंलाई पीडा र आध्यात्मिक घाउहरू दिन्छ? अब भगवानको निन्दा (अनादर) नगर्नुहोस्। "क्रिस्चियनिटी" जस्ता जनावरको कपटबाट पश्चात्ताप गर्नुहोस् र पाप र चर्च खेल्न दुवै छोड्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंसँग पवित्रता र येशू ख्रीष्ट र उहाँको वचनको पूर्ण आज्ञाकारिताको लागि अडान लिने अधिकार हुन सक्छ।
नोट: तलको यो रेखाचित्रले देखाउँछ जहाँ पाँचौं शीशी सन्देश पूर्ण प्रकाश सन्देश भित्र छ। यी "परमेश्‍वरको क्रोधको भाँडाहरू" सन्देशहरूले कपटको प्रभावलाई नष्ट गर्ने परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्दछ। प्रकाशको उच्च स्तरको दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईंले "प्रकाश को रोडमैप।"
कोटीहरू7शीशी, जनावर, झुटो फैसला, झूटा शिक्षाहरु, प्रकाश १6 ट्यागहरू अन्धकार, धोका, पाखण्ड, न्याय, शैतानको सिट, क्रोध पोस्ट नेभिगेसन
यूफ्रेटिसलाई सुकाउनुहोस् ताकि पूर्वका राजाहरू पस्न सकून्